Wednesday March 25, 2020 - 16:51:59 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Mas'uul katirsan maamulka isku magacaabay 'Jubbaland' ayaa dhintay tiro ciidamo Kenyaan ahna dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii qarax xooggan lagula beegsaay cirifka fog ee Koonfurta Soomaaliya.
Wararka ka imaanaya deegaanada dhaca xuduud beenaadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya ayaa sheegaya in qarax xooggan lala helay kolonyo ciidamo Kenyaan ah oo ku socdaalayay deegaanka Raaskaambooni ee Jubbada Hoose.
Ilo wareedyo ayaa xaqiijinaya in qaraxa uu ku dhintay Cabdullaahi Diiriye oo ahaa guddoomiyihii deegaanka Raaskaambooni uqaabilsanaa maamulka Axmed Madoobe iyo sedax askari oo kamid ahaa ilaaladiisa.
Weerarkan oo mas'uuliyaddiisa ay sheegatay Xarakada Al Shabaab waxaa ku dhaawacmay sedax askari oo katirsan ciidanka guumeysiga Kenya ee loo yaqaan KDF, wararka ayaa intaas ku daraya in qaraxu uu mar qura qabsaday cadawga wadajirka ah balse khasaaraha ugu badan wuxuu gaaray dabadhilifyada Soomaalida.
Deegaannada dhaca xeebta Jubbada Hoose sida Raaskaambooni iyo Buur Gaabo waxaa gummeysi ku heysta ciidamo Kenyaan ah halkaas oo ay ka dhiseen maamullo si toos ah u hoos taga xukuumadda Nairobi waxaana deegaanadaas laga hirgeliyay shirkad isgaarsiineed oo dowladda Kenya leedahay.